Shirkii 'Afisiyooni' oo galay maalintii 3-aad | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii ‘Afisiyooni’ oo galay maalintii 3-aad
Shirkii Golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa galay maalintii saddexaad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkii Golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ee uga socday madaxda dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo gobolka Benaadir ayaa galay maalintii saddexaad, iyadoo ay dibad-joog ka yihiin warbaahinta madaxa bannaan ee ka howl gasha Soomaaliya.
Shirka oo socday labadii maalin ee u dambeysay, islamarkaana ay albaabada u xirnaayeen ayaa laga soo sheegayaa in ay jirto rajo wanaagsan taasoo dadka intiisa badan ay qabaan in shirka uu najixi doono, walow qodobadii la isku hayay ee ugu adkaa aan weli la shaacin in xal laga gaaray.
Shirka ayaa sal looga dhigay heshiiskii 17 -kii September iyo is afgaradkii guddiga farsamada ee 16 -ka Febaraayo ay ku gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin, haddana waxaa la tilmaamay in shirka lasoo gaba-gabeyn doono maanta iyadoo la rajeynayo in laga soo saaro war-murtiyeed umadda Soomaaliyeed dan u ah, islamarkaana muujinaya in xal laga gaaray arrimihii doorashooyinka ee muranka adag uu ka taagnaa.
Qodobada xasaasiga ah ee shirka looga hadlayo waxaa kamida:
Xal kaa gaaridda gobolka Gedo.
Xallinta muranka kuraasta Gobollada Waqooyi
Dhismaha guddiyada doorashooyinka.
Afartan qodob ayaa ugu adag waxyaabaha looga hadalayo shirka doorashooyinka Soomaaliya, waxaana loo baahan yahay in la helo tanaasul maadaama in muddo ah la isku hayay, koox kastana ay ku dhagganeyd meesheeda.